.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: MM Ringtones Collection ! for Android
MM Ringtones Collection ! for Android
ကျနော့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Battery Doctor လေးကို ဘာသာပြန်ပြီးမျှဝေလိုက်ကတည်းက ဖုန်းဆက်ပြီးအားပေးကြတဲ့
သူငယ်ချင်းများကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။ အခုလည်း ကျနော်ရဲ့ဒုတိယ ကြိုးစားမှုအဖြစ်
မြန်မာ့ ringtones app လေးကိုထပ်မံပြီးမျှဝေလိုက်ပါပြီ။ ပါဝင်တဲ့ Ringtones လေးတွေကတော့
►မြန်မာ့ဟာသ ringtones လေးတွေ
►လူသုံးအများဆုံး ringtone ၂ ပုဒ်ဖြစ်သော ( စာမျက်နှာ ၁၅ နဲ့ တောင်းပန်တယ် )
►ကွယ်လွန်သူ ဆရာ ကေအေတီ ရဲ့ ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားသောသီချင်းတစ်ပုဒ်
►ကျနော့်ချစ်သူအရမ်းကြိုက်သော သီချင်း ၂ ပုဒ် ၃ ပုဒ်ခန့် (ဝိုင်းစု၊အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်၊ချမ်းချမ်း)
►Harvest Moon – Back To The Nature PS1 ဂိမ်းလေးထဲမှ ကျနော်အရမ်းကြိုက်တဲ့
Opening Theme Song2( နံပါတ် ၂၇ ) ထိုသံစဉ်လေးကိုကျနော် နှိုးစက်သံလုပ်ထားပါတယ်။
►အားလုံး ၄၅ ပုဒ်ခန့်ပါဝင်ပါတယ် ။
အားပေးကြမယ့်သူငယ်ချင်းများကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ !!
Download: MM Ringtones Collection !
ပထမ ကျနော်ဘာသာပြန်ခဲ့သော Battery Doctor App လေးပါ=> Battery Doctor APP
မှတ်ချက်။ ။ ဒီ App တွေကို ကို Nyimin Latt (Myanmar Mobile User Group) မှ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Thurainlin at 07:40
Labels: Android App, Ringtones